Hutano, 01 Ndira 2015
Zvita 19, 2014
Vana Chiremba Vakaramwa Mabasa Vobatirwa Mari neHurumende
Sangano rinomirira vana chiremba vemuzvipatara zvehurumende, reZimbabwe Hospital Doctors Association, rinoti ranyorera tsamba kudare remakurukota richinyunyuta nekubatirwa mari kwaitwa nhengo dzesangano iri.
Zvita 15, 2014
Vanachiremba Voronga Kuramwa Mabasa Zvekare
Vana chiremba muzvipatara zvehurumende vanoti vanogona kukanda mapadza pasi panguva yakakosha zvikuru yekisimusi nenyaya yekunetsana kwavo nehurumende panyaya yemihoro.
National Blood Services Yokurudzira Vanhu Kupa Ropa
sangano re National Blood Services Zimbabwe rinoti rabatana nemamwe masangano mukuita zvirongwa zvekukurudzira veruzhinji kuti vape ropa.
Zvita 10, 2014
VaMnangagwa Vanobudirira Mukurwira Chigaro cheMutevedzeri weMutungamiri weZanu PF
Mutungamiri weZanu PF, VaRobert Mugabe, vadoma vatevedzeri vavo vaviri pamwe nenhengo dzekomiti yepamusoro soro yebato ravo.
Vamwe Votarisisa Remangwana raVaMugabe seMutungamiri
Nyanzvi yezvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira, VaCharles Mutasa, vanoti zvakabuda pachena kuti VaMugabe munhu ave kufanirwa kunge achizorora, kwete kuti atarisirwe kumirira bato reZanu PF zvakare musarudzo dzichaitwa muna 2018.
Hama dzaPretty Xaba Dzotsvaga Rubatsiro rweMari Kuitira Kuti Mufi Azovigwa Kumusha
Mhuri yamuzvare Pretty Xaba, avo vakashaikira ku kuindia nemugovera mushure mekurwara nechirwere chegomarara repahuro, inoti iri mushishi mekuunganidza mari yekuti iwunze mutumbiwake munyika.
Zvita 07, 2014
Pretty Xaba Anoshaikira kuIndia
Xaba anga achirapwa ari kuIndia kwakare chirwere chegomarara repahuro. Chirwere ichi changa chava nenguva chichimunetsa.
Amai Mujuru Vanokwazisa Vakuru veMauto neMapurisa
Mutevedzeri wemutungamiri wenyika, Amai Mujuru, vakwazisana nevakuru vemauto nemapurisa pakuonekwa kwanga kuchiitwa gamba renyika, VaLloyd Kotsho Dube kuStoddard Hall muMbare vasati vanoradzikwa kuHeroes Acre.
VaKapuya Vanoti VaMugabe Vava Mukweguri Anofanirwa Kusiya Basa
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika inoti zvinoshamisa zvikuru kuti mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, havasi kuda kusiya chigaro chavo kunyange hazvo vava mukweguri.